Nirdosh Ma (Innocent Me) - निर्दोष म - Nayan
Nirdosh ma (निर्दोष म) - INNOCENT ME
उनी रिसाइन क्यारे मस“ग । मेरा दुई शब्दले उनको मन भा“चिदिए छ क्यारे । जीवन र प्रेमको मात्र दुई शब्दले तर म निर्दोष छु म यी दुई शब्दहरूलाई अलग गराउन सक्दिन“ । संर्षहरूलाई असारको भेलस“गै समेटेर आकाश र बगरको मिलन खोज्दै जीवनको बेसीतिर बगिरहने इन्द्रावतीलाई तिमी दोषी नभन । नत्र म पनि भन्छु एउटा सुन्दर फूल पनि दोषी छ, ऊस“ग लाखौंलाख ह्दय घोचिदिने का“डाहरू छन् । अविश्वास र अहंकारले जितिसकेको यो पापी संसारमा कुनै पनि बस्तु आफैमा पूर्ण छैन । तर त्यही अपूर्णतालाई अंगालेर पापीको संज्ञा पनि त दिन मिल्दैन । कहिलेकाही त तिमीले भन्ने गरेका वाध्यताहरू, जीवनका रहस्यलाई एउटा कुनामा बन्दि बनाएर यो संसारमा हेर तिम्रा रहरहरू चाहनाहरू फूल बनेर तिम्रो अगाडि फक्रनेछ ।
आज थोरै चित्त दुख्यो नखाएको विष पनि लागे जस्तो भयो । उनको परिवर्तनले आज म आफै डुबिरहेको नाउमा पनि कैदी बने जस्तै लाग्यो । संसार सबै भ्रम जस्तो लाग्यो । उनी भन्छिन,जीवन अनि प्रेम दुई किराना हो । प्रेम भनेको जीवन होइन, जीवन भनेको बाध्यता हो । बाध्यता भित्र वेरिएर समाजमा घुल्न सिक्नुहोस । अनि मात्र जीवन र प्रेमको दुरी देख्नुहुने छ । दाइ चिया आयो † म मज्जाले झस्किएछु । वेटर चिया राख्दै प्रतिप्रश्न गर्छ, दाइ त झस्किनु भयो नि, अ“ भन्दै टाउकाले मात्र संकेत दिन्छु । दा“याबाया“ सबै टेबलहरू खालि थिए, सुन्यतामा हराएछु, आजभोलि यही नै प्यारो लाग्छ ।
सिमसिम पानी परिरहेको थियो । असारको झ्याउ“कीरी सा“झ, खेतका आलिहरू, हरिया मकै र मोही सम्भ“mदै गर्दा रत्नपार्कसम्म पुगेछु । खाना खाएर पढ्ने सुरसार गरे । मोवाइल बज्यो उठाउन मात्र के आटेको थिए“ उसले काटिदियो । अरे बगाले π कति मिसकल मात्र दिन्छस् ? फोन जहा“को त्यही राखिदिए । फोन नजिक गराइदिने एउटा वैज्ञानिक साधन जस्तो लाग्थ्यो तर ठीक उल्टो पनि रहेछ । एक दिन एसएमएस गरि उनले सोधिन– तपाईलाई कसले बढी छुन्छ ? एउटा व्यक्ति जसलाई तपाई पूरा विश्वास गर्नु हुन्थ्यो उसले तपाईलाई दिएको धोका की एउटा व्यक्ति जसलाई तपाई धोका दिनुभयो र उसको तपाईप्रतिको विश्वास ? एकछिन अलमलिए“ । लाग्थ्यो दोस्रो विकल्प निकै भावनात्मक छ । तर मैले पहिलो रोजे । उत्तर फर्काए दुई आत्मा बीचको मिलन विश्वासको इन्द्रेणीले नै गा“सेको हुन्छ । त्यो इन्द्रेणीलाई कसैले मेरो आत्माबाट चुडाएको छ ।
त्यसै पनि त हाम्रो धेरै वर्षपछि भेट भएको थियो । सानो छ“दा एउटै स्कुल पढेको स“गै खेलेको सम्झदा म र उनी बिच ती बालापनका क्षणहरू कैद भए जस्तो लाग्थ्यो । उनीस“ग अर्कै माया थियो । उनी मेरो लागि एउटा पृथक साथी थिए, मात्र साथी । मसिनो आवाज ह“सिलो मुहार र त्यो भन्दा बढी उनको मीठो मुस्कान थियो । उनलाई समय समयमा फोन गर्दा पनि निकै रमाइलो लाग्थ्यो । साथीहरूको भीडमा उनलाई पाएर भाग्यमानी मान्थे । उनलाई थाहा थियो ऋतिपा । उनी अनुमान लगाउथिन कि म ऋतिपास“ग पे्रम गर्छु । कहिले काहि भन्थिन पनि मैले केही सहयोग गरौ ? मेरो परिवारमा पनि ऋतिपास“ग विवाहको प्रस्ताव राख्ने सम्म कुरा चलेको थियो । एक दिन सानो कुरालाई लिएर ऋतिपा र म बीच मनमुटाव भयो तर भोलिपल्ट नै ऋतिपा मेरो घर आइन हिजोको गल्ति स्वीका गर्दै माफ मागियो । अनि हामीबीचका सारा रिसहरू साम्मे भइगए । त्यसपछिका दिनहरू ऋतिपास“ग रमाइलो गर्दै बितिरहेका थिए । उनलाई थाहा थियो हामीबीच झगडा भएको त्यसैले ऋतिपा र मेरो सम्बन्ध प्रेमपछिको धोका अनि धोका पछिका काला दिनहरूमा बदलिएको ठान्दथिन ।
फेरि अर्को दिन ऋतिपा मेरो घर आइन । उनलाई मैले एसएमएस पठाए । आज ऋतिपा मेरो घर आएकी छन् । उत्तर फर्काइन् रमाइलो भयो होला नि त π साझमा पुन ः एसएमएस गरि ऋतिपा आइन तर पहिले जस्तो रमाइलो भएन । जुन व्यक्तिलाई मुटुको गहिराइमा लुकाएर राखिन्छ र त्यही व्यक्तिले नै घायल बनाई लढाउछ भने कसरी रमाइलो भयो भन्नु...। मैले मात्र उनले ऋतिपा र मेरो सम्बन्धलाई कसरी हेरेकी रहिछन भनेर बुझन खोजेको थियो । एकछिनमा जवाफ पठाइन । त्यस्तो भन्नु हु“दैन, ऋतिपा जे भए पनि असल केटी हो, सायद ऊ अलि गम्भीर नभएकोले होला उसको बारेमा यस्तो लगेको । उनले ऋतिपाको साथ दिइन । तपाई गलत हुुनुहुन्छ । तपार्यको सोचाई गल छन ।
तपाईलाई जीवन र प्रेमको अर्थ थाहा छैन । तपाई जस्ता मानिसले गर्दा त आज सच्चा प्रेमको पनि हार भएको छ । प्रेमको अर्थ नबुझदा त कैयौं जीवन अन्त भएको छ । उनले मलाई लगाएको आरोप बुझ्न निकै गाह्रो भयो । त्यसदिनपछि पवित्र साथीको साइनो चु“डाएर उनी मबाट टाढिन् । म स्वयम्लाई थाहा छैन केले गर्दा उनको मनमा चोट लाग्यो,उनलाई म देखि वितृष्णा जगायो । भन्ने गर्थिन ,घाम पूर्वबाट उ“दाउछ र पश्चिममा गएर अस्ताउछ तर हाम्रो सम्बन्ध मनबाट उ“दाएको छ र मृत्युपछि मात्र अस्ताउछ ।
म आज तिमीलाई भन्छु – मैले कसैलाई मेरो मन मुटु सुम्पिसकेको छु । मेरो यो मेरो जीवन सच्चा पे्रममा समर्पित छ । प्रेममा दूरी अनि समयको हिसाब हुदैन भन्थे त्यही सोचेर विगत पा“च वर्षदेखि म आप्mनो सच्चा प्रेमको प्रतिक्षामा कुरिरहेछु । मेरो पहिलो प्रेम, मिलिमा ।
कतै तिम्रो... If Yours
परिर्वतन - Changes
जीवनका र¨हरु - Colors of Life
यहा बा“च्न चाहनेहरु - Here, Who wants to Live
उजाड जिन्दगी - Barren Life
चाहाना तिम्रो - Yours Dreams
आज उनी हासिन - She laughed today
शुन्यतामा फर्कदै गरेका पाइलाहरू - Footsteps Returning Back From Emptiness
उसलाई - For You
नेता - Politician
एउटा - One
शुभकामना - Goodluck
मेरो रहर रहेछ - Was my dream
मलाई - For Me
गीत - Song
तिमी - You
म - I
तिमं्रो विविधता - Yours Advantages
तिमी बिना - Without You
तिमीलाई भन म कसरी - How I Say To You
यर्थातता - The Facts
साथीहरु - Friends
शंका लाग्छ तिमीमा - Doubt on You
पवित्र सम्बन्ध - Pure Relationship
मेरो जीवन - My Life
मन लाग्यो - Wish To
तिमी किन पर्खि बसेकी ? - Why are you waiting?
तिमीस“ग (कविता) - With You (Poem)
उनी - She
किन यसरी बदलि दियौ - Why are you changed like this?
उनको विश्वास - Trust of her
उपहार के दिउ“ तिमीलाई - What present should I give to you?
फेरि फर्की आए - If returned back again
जीवन मेरो - Life of Mine
गा“स्न मनहरु - Bounding Hearts
तिमीलाई - For You
एक दिन - One Day
माया सा“चो छ - Love is True
भैंसी - Buffalo
तिमी सामुन्ने ह“ुदा - You being infront of me
किन पूmल्छ पूmल - Why Flower Blooms?
रगत - Blood
किन खेल्नु प¥यो - Why should it be played?
यदि - If
मेरो तृष्णा - My Thirst
समयले कु“देको गल्ली - Street Wandered by Time
आ“शुको शराप - Curse of Tears
Nayan © Rabins Sharma Lamichhane. All rights reserved. | An Anjaan SMG
Nayan,ajourney through eyes isaNepalese collection of the isolated dreams and journey to the heart through eyes.